Wasiirka wasaaradda Hawlaha Guud Gaadiidka iyo Guryaynta & kuxigeenkiisa oo kulan la qaatay gudigga uqareemida Gaadiidlayda puntland iyo ganacsato. | Ministry of Public Works & Transport in Puntland
23rd September 2019 at 10:23 am By Halima Ahmed
Wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guryaynta Axmed Bashiir Muuse iyo kuxigeenkiisa maxamed xuseen xaashi ayaa maanta kulan la qaatay guddiga uqareemida Gaadiidlayda Puntland iyo ganacsato.
Wasiirka ,Kuxigeenkiisa ,gudigga iyo Ganacsatada ayaa kawada hadlay sidii laysaga kaashan lahaa dhismaha wadada ku meelgaarka ah ee gaadiidku isticmaalilahaayeen inta uu socdo dhismaha wadada isku xirta Garowe iyo Gaalkacyo.
sidoo kale gudiga gaadiidlayda ayaa si guud cabasho waxay u gudbiyeen Wasaaradda Hawlaha guud inay wadada isku xirta inay dawladda iyo gaadiidlayda oo iskaashanaya ay dayactiraan inta ay roobabka dayrtu ka di’in deegaanada puntland.
ugu dambay wasiirka wasaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guryaynta axmed bashiir ciro ayaa sheegay in dawladda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Deni uu qorshayaasheeda koowaad ka mid yihiin dib u dhiska dalka iyo dayactirka wadooyinka halbowlaha u ah puntland.